एक्लो छोराको २४ वर्षको अल्पायुमै निधन भएपछि बुहारीलाई घरबाटै बेहुली बनाएर धुमधामका साथ बिबाह गरिदिए पोख्रेल परिवारले ! – " सुलभ खबर "
एक्लो छोराको २४ वर्षको अल्पायुमै निधन भएपछि बुहारीलाई घरबाटै बेहुली बनाएर धुमधामका साथ बिबाह गरिदिए पोख्रेल परिवारले !
काठमाडौँ- मोरङको केराबारीका उक परिारले आफ्नाी बुहारकिो धुमधामसँग बिहे गरिदिएका छन् । आफ्नो छोराको निधन भएपछि एकल जीवन बिताउदै आएकी बुहारीको बिहे गरिदिएका हुन् । कुवेरप्रसाद पोख्रेलका परिवारले छोरो गुमाएपछि एकल बनेकी बुहारी सुनिता पोख्रेलको आफ्नै घरबाट विवाह गरिदिएर समाजकै नमुना बनेका हुन् ।